सांग्रिला डेभलपमेन्टले कमायो ३३ करोड नाफा
साउन २९, काठमाडौं (अस) । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को चौथो त्रैमासिक वित्तीय सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले गत आवमा रू. ३३ करोड १७ लाख खुद नाफा कमाएको छ । यो अघिल्लो आवको तुलानमा २० दशमलव ३६ प्रतिशत बढी हो ।
अघिल्लो आवमा बैंकको खुद नाफा रू. २७ करोड ५६ लाख थियो । बैंकको खुद ब्याज आम्दानी अघिल्लो आवको तुलनामा २२ दशमलव ५९ प्रतिशत बढेर रू. ९६ करोड ८६ लाख पुगेको छ भने सञ्चालन मुनाफा १९ दशमलव ९० प्रतिशत बढेर रू. ५२ करोड १ लाख पुगेको छ ।
समीक्षा अवधिसम्म बैंकको चुक्तापूँजी रू. २ अर्ब ६० करोड ६६ लाख रहेको छ । बैंकको जगेडा कोषमा रू. ६८ करोड ३२ लाख जम्मा भएको छ । बैंकले रू. २२ अर्ब ४७ करोड निक्षेप संकलन गरेको छ ।
गत आवमा बैंकले रू. १९ अर्ब ४६ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकको निष्क्रिय कर्जा शून्य दशमलव ८ छ । बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी रू. १२ दशमलव ७३ छ भने प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १२६ दशमलव २१ रहेको छ । बैंकको तलरता अनुपात भने २५ दशमलव ७५ प्रतिशत रहेको छ ।
भारतमा कारखाना उत्पादन खुम्चियो
तेस्रो घण्टामा नेप्से स्थिर, कारोबार रकम २४ करोड (२ बजेको अपडेट)
१५ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको लक्ष्मी बैंकको नाफा ४० करोड
तस्वीर : काठमाडौंमा बंगलादेशका राष्ट्रपति
गुडविल फाइनान्सको नाफामा १६ प्रतिशत वृद्धि